Kiiboodh bilaash ah oo bilaash ah oo tooska ah - qaabeynta 231 luqadood | Losderi.com
Kiiboodhka muuqaalka tooska ah ee khadka tooska ah
AfrikaansAlbanianAmharicArabicArmenianAzerbaijaniBasqueBelarusianBengali(Bangla)BosnianBulgarianBurmeseCatalanChichewa( Chewa, Nyanja)ChineseCorsicanCroatianCzechDanishDutchEnglishEsperantoEstonianFinnishFrenchGalicianGeorgianGermanGreek (modern)GujaratiHaitian(Haitian Creole)HausaHebrew (modern)HindiHungarianIcelandicIgboIndonesianIrishItalianJapaneseJavaneseKannadaKazakhKhmerKinyarwandaKoreanKurdishKyrgyzLaoLatinLatvianLithuanianLuxembourgish(Letzeburgesch)MacedonianMalagasyMalayMalayalamMalteseMāoriMarathi (Marāṭhī)MongolianNepaliNorwegianOriyaPanjabi(Punjabi)Pashto(Pushto)Persian (Farsi)PolishPortugueseRomanianRussianSamoanScottish Gaelic(Gaelic)SerbianShonaSindhiSinhala(Sinhalese)SlovakSloveneSouthern SothoSpanishSundaneseSwahiliSwedishTajikTamilTatarTeluguThaiTurkishTurkmenUkrainianUrduUyghurUzbekVietnameseWelshWestern FrisianXhosaYiddishYorubaZulu
Kumbuyuutar kumbuyuutar oo bilaash ah khadka tooska ah
Haddii aad u baahan tahay inaad wax ku duubto luuqad kasta, laakiin kombiyuutar ama laptop waxaad leedahay Ingiriis ama qaab-dhismeed kale - waxaad u baahan tahay kumbuyuutar kumbuyuutar ah oo shaashadda kombuyuutarka ah oo leh luqaddaada. Way fududahay in la isticmaalo oo ku habboon. Haddii goobta ay tahay wax aadan jeclayn ama wax aysan shaqeyn ama uusan run ahayn - fadlan nala soo socodsii. Aad ayey muhiim noogu tahay.
Onpdrever.com adoo adeegsanaya kiiboodh dalwaddii, gabi ahaanba waad xor noqon kartaa oo khadka tooska ah:
wax ku qoraya khadka tooska ah ee afka hooyo;
si toos ah farriimaha ugu dir asxaabtaada bartayada;
ka raadi Google iyo YouTube 1 guji (wuxuu ku furi doonaa daaqad cusub);
lagu turjumay adoo adeegsanaya Google-turjumaan hal guji (wuxuu ku furi doonaa daaqad cusub);
qoraal ku soo dhig Facebook-ga oo ku soo qoro barta Twitter-ka;
keydi qoraaladaada si aad u sii wadato qorista mar dambe (waxaad u baahan tahay inaad gasho);
soo dejiso oo daabac dukumintiyadaada;
Kuqoritaanka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ah - waa bilaash oo sahlan
Waxaan tijaabinay waqti dheer barta internetka iyo qaabka kumbuyuutarka si aad kuugu sahlanaato. Oo hadda waxaan ku kalsoonahay raaxadaada marka aad wax ku qoreyso kumbuyuutarkeena internetka shaashadda kormeerahaaga. Dhawaan waxaan ku dari doonaa kiiboodhka qaabka alifbeetada. Waa wax aad u fudud in la duubo waraaqaha, la turjumo, la daabaco lana keydiyo, si loola xiriiro saaxiibbada leh Facebook iyo Twitter. Iyo dabcan - muxuu yahay internetka oo aan lahayn raadinta Google iyo fiidiyaha YouTube-ka? Dhamaan ficiladan waxaa lagu sameeyaa boggayaga internetka hal guji - iskuday! Sidoo kale, waad keydin kartaa dukumiintiyadaada daabacan (waxaad ubaahantahay inaad gasho adoo adeegsanaya Facebook, Twitter ama Google), taasi oo markii dambe sii socon laheyd.
Sida loo helo loona isticmaalo kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarkaaga ah?
Waxaad sidoo kale ku rakibi kartaa websaydhka xiriiriyahayaga, badhanka, ama dhammaan kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee tooska ah - tan waxaad u baahan tahay inaad nuqul ka sameyso oo aad ku dhejiso koodhka boggaaga ama balooggaaga. Waxaan sidoo kale u furan nahay soojeedimaha astaamaha aad u baahan tahay - kaliya na qor oo sharax waxa naga maqan (faahfaahinta ugu badan - waa ka fiican tahay) - waxaan sameyn doonaa waxaad u baahan tahay!
Tarjumaad kumbuyuutarka qadka tooska ah ku qoran
Si loo turjumo qoraalka lagu duubay kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee tooska ah, kaliya dhagsii «Translate» daaqad cusubna waxay furi doontaa turjumaanka khadka tooska ah ee adduunka ugu caansan Google. Asal ahaan, tarjumaadda Ingiriisiga oo laga soo qaatay luuqadda kumbuyuutarka, laakiin waxaad ku dooran kartaa mid kasta oo kale ikhtiyaar u ah. Adeegani wuxuu ku qoran yahay Ingiriis ka hor USA, Boqortooyada Ingiriiska (Ingiriiska), Kanada iyo Australia.